Monday October 14, 2019 - 15:34:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka sare ee dowladda Kenya ayaa ka hadlay weerar Askar badan lagu laayay oo xoogaga Al Shabaab ay maalin ka hor ka fuliyeen dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga kujira.
Uhuru Kenyaatta oo ah madaxweynaha dalka Kenya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu si aad ah uga murugooday 11 sarkaal oo ciidamadiisa looga dilay qarax 12-kii bishaan ka dhacay deegaan katirsan gobolka Gaarisa.
Wuxuu sheegay in uu tacsi tiiraanyo leh udirayo ehellada saraakiishii dhimatay wuxuuna cambaareyn dusha uga tuuray Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee mas'uulka ka aheyd qaraxaasi.
Madaxtooyada Kenya waxay sheegtay in shacabka iyo ciidanka Kenya ay khatar kala kulmayaan wax ay ugu yeertay weerarada Argagaxiso ee ka imaanaya dhaq dhaqaaqa jihaadiga Al Shabaab.
Dhinaca kale dowladda Turkiga ayaa si kulul u dhaleecaysay weerarkii 11-ka sarkaal looga dilay ciidanka Kenya, Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogaan uu si aad ah uga xumaaday dhimashada askarta Kenyaanka ah.
Dowladda Turkiga oo dhanka dhaqaalaha iyo tababarrada uga qeyb qaadanaysa duullaanka shisheeyuhu kusoo qaadeen Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ugu baaqday in ay sii xoojiso dagaalka ay kula jirto Al Shabaab.
Qarax sabtidii lasoo dhaafay ay Al Shabaab ku burburisay gaari ay wateen ciidamada Kenya oo ku socdaalayay deegaanka Kulan ee xuduud beenaadka dhaca ayaa sababay dhimashada 11 sarkaal oo katirsan Booliska Kenya.